Author Topic: ကိုယ်တိုင်ရေး သရော်စာ (Read 69289 times)
« Reply #60 on: October 18, 2012, 02:13:59 PM »
တစ်ကောင်ကြွက် နေမင်းမောင်လေးဟာ စာပေကလည်းမတတ် လက်ကြောကလည်းမတင်း အားအားရှိအင်တာနက်ထိုင်သုံးနေသောကြောင့် ရပ်ရွာမှ ဘယ်သူမှလည်းမကြွေးမွေး မစောင့်လျှောက်သည့်အပြင် ရွာတင်အင်မတန်မှာ စေတနာသဒ္ဒါ တရားရှိလှသော ကိုရင်ပြုံး တောင် ဥပက္ခာပြုလိုက်ပီမို့ မြို့တက်၍ သူဌေကြီး ဦးထွန်းအေး ဇနီး မအိုင်မေး တို့ အိမ်တွင် အိမ်ဖော်အလုပ်ကို လုပ်ကိုင် ရလေတော့သည်။ ထိုအိမ်မှာပင် သူနှင့်ရွယ်တူ မင်းသမီးလေး ဟူသော သမီးတစ်ယောက်ရှိလေသည်။
မောင်နေမင်း လေးဟာ အရွယ်ကလည်းရ ပညာနှင့်ဥစ္စာအရာမှာ ကုန်းကောက်စရာမရှိအောင် မွဲတေလှသော်လည်း မျက်နှာလေးနှင့် ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်မှာ အင်မတန်မှလှလေ၏
ဤသို့ဖြင့် နေလာကြရာမှ နေမင်းမောင် လေး၏ အလှကိုမြင်မြင်ကတည်းက စွဲလမ်းနေသော မင်းသမီးလေးသည် ကျားချောင်းသလိုချောင်းနေရာ အခွင့်သာသောနေ့တစ်ရက်တွင် နေမင်းမောင်လေးအား
အဓ္ဓမပြုကြင့်ကာ အမိုက်အမှောင်ချစ်စခန်း ဖွင့်ကြလေတော့သည်. `(ဤတွင် ရုပ်ရှင်ဖြစ်ပါက ငှက်ပြောသီးအား ဒါးဖြင်ခုတ်ပုံကို အနှေးပြသစေ)
ဤသို့ဖြင့် နေမင်းမောင်လေးမှာ ၁၀လအကြာတွင် သားရတနာလေးတစ်ယောက် မွေးဖွားလာလေတော့သည်။ ထိုအချိန်မှ ဦးထွန်းအေးနှင့် ဇနီးမအိုင်မေးတို့သည်လည်း မျက်လုံးပြုးမျက်စံပြူးဖြစ်ကာ သမီး မင်းသမီးလေးအား စင်ကာပူသို့အတင်းစေလွတ်လေတော့သည်။ နေမင်းမောင်လေးကိုလည်း ငွေများပုံပေးက သမီးမင်းသမီးနှင့် မပတ်သတ်ရန်ပြောလေတော့သည်။
ဤတွင်အချစ်နှင့် မေတ္တာ ကိုတန်ဖိုးထားသော နေမင်းမောင်က
“ကျန်တော်ခင်ဗျားတို့သမီးကိုချစ်ခဲ့တာ ဟောဒီက ရင်ဘတ်ကြီးနဲ့ချစ်ခဲ့တာ ဟောဒီငွေတွေကြောင့်ချစ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူး” ဟုဆိုတာ မင်းသမီးလေး`၏ မိဘများအား ငွေထုတ်နှင့် ပြစ်ပေါက်လိုက်လေရာ ၅ထောင်တန်များ ၀ဲကနဲ လွင့်ပျံသွားလေတော့သည်။
ဤသို့ဖြင့် မေတ္တာကိုတန်ဖိုးထားသော နေမင်းမောင် လေးမှာ သားတစ်ယောက် ခါးတစ်ခွင်ဆင်းလာပြီး ရန်ကုန်မြို့ရှိ ဆင်ခြေဖုန်းရပ်ကွက် လေးတစ်ခုတွင် အကြော်ဗန်းလေးခေါင်းရွက်ကာ
“ဟောဒီက အကြော်စုံ” ဟုသံကုန်ဟစ်ကာ ဆင်းဆင်းရဲရဲ ဈေးရောင်းစားရလေသည်။
ဤသို့ဖြင့် မောင်နေမင်း မှာ ကလေးတစ်ယောက်အဖေဆိုသောလည်း တစ်နေကုန် ပါးကွက်ကြားမပျက် ချွေးကလေးမကွက်ပဲ တစ်သားမွေးသသွေးလှဆိုသလို မျက်နှာလေးက မှုန်နေအောင် ချစ်ချင်စရာမို့
ရပ်ကွက်ထဲမှ ပျိုပျို အိုအို မုဆိုးမ တစ်ခုလပ် မ များက အချိန်အခါမလပ် ကြံစည်ကြကုန်လေ၏။
ဤသို့ဖြင့် တစ်နေ့သ၌ သားငယ်ကလေးကျောင်းသွားခိုက် မောင်နေမင်းမှာလည်းဈေးရောင်းပြိးအပြန် ရေမိုးချိုးပြီး လုံချည်လေးရင်လျှားကာ သနပ်ခါးသွေးလိမ်းချိန်
ဒုန်းကနဲ့တခါးဖွင့်သံကြား၍လှည့်အကြည့် ရက်ကွက်ထဲမှာ ဓါးထက်လှပါသည် ဆိုသော ငါးစိမ်းသည် ဒေါမည်းတူ
‘ဟင် ခင်ဗျား ခင်ဗျာ ကျန်တော်ကိုမတရားမလုပ်နဲ့နော် မတရားမလုပ်နဲ့”ဟူ တောင်းပန်သော်လည်း လျှင်မြန်လှသော ဒေါ်မည်းတူလက်က ပါးစပ်ကိုပိတ်ပြီးဖြစ်လေသည်။
(ဤတွင် ရုပ်ရှင်ဖြစ်ပါက ခါးရမ်းသီးကို ဒါးမနှင့်ထု ပုံကို အနှေးကွက်ပြသစေ)
ဤသို့ဖြင့် အိမ်ရှေ့ဝ မှာ ကြူကြူပါအောင်ငိုရင်း ဒူးနှင့်မျက်ရည်သုတ်နေသော နေမင်းမောင်။
“သားလေး ဘာလို့ငိုပြီးပြန်လာ ရတာတုန်းသားရယ် မထိပ်မလန့်သာရှိလိုက်တာ သားရယ်” ဆိုတော့
“အဖေ အဖေ သားကိုလည်း ကျောင်းက သားသူငယ်ချင်းတွေက မေးကြတယ် မင်းရဲ့အမေက ဘယ်သူလည်းတဲ့ သားဘယ်လိုဖြေရမှာလည်းအဖေရဲ့ “ ဟူပြောတော့
ငယ်စဉ်ကတည်းက အနာရထားတဲ့ နေမင်းမောင်က မျက်ရည်ကြားက ဒေါသတကြီးဖြင့်
“တော်စမ်းသား နင့်အမေအကြောင်းဘာမှ မမေးနဲ့လို့ပြောထားတယ်မဟုတ်လား”
“ဟင့်အင်း ဟင့်အင်း မရဘူးမရဘူး ဖြေဖြေပြောကိုပြောပြရမယ် သားကိုချစ်ရင်ပြောပြပါဖေဖေရယ်”
ဟုအတင်းတောင်းဆိုလာတော့ ခံစားချက်ရှီနေတဲ့ နေမင်းက အံကြိတ်ပြီး ပြောချလိုက်လေတယ်။
သူသားလေး ပါးစပ်ဟက မျှော်လင့်ချက်ဖြင့်ငေးလေသည် နေမင်းမောင်က ကလေးကိုလက်ညိုးထိုးပြီး
“မင်းဟာမယားကောင်မပေါပဲ မွေးခဲ့တဲ့သားကွ …မင်းဟာမယားကောင်မပေါပဲမွေးခဲ့တဲ့သား”
သားဖြစ်သူ မျက်လုံးပြုးသွားသည်။ ပြီးမှဇဝေဇ၀ါဖြင့်
“သားဟာ မယားကောင် မပေါပဲမွေးခဲ့တဲ့သား ဟုတ်လားအဖေ “
ထိုတော့မှ သားဖြစ်သူလည်း မျက်ရည်သုတ်ပြီး။
“တောက်အဖေကိုခြေတော်တင် ခရမ်းသီးမှန်ရင် ကပ်ကြေးနဲ့ညှပ်မယ် ဆိုတဲ့ မိန်းမတွေကို သားအရမ်းမုန်းသွားပြီ….သားသိပ်မုန်းသွားပြီအဖေ…….”
“မှန်တယ်ငါ့သား မိန်းမမှန်ရင်မုန်းသင့်တယ် “
ဒီလိုနဲ့နေလာပြီး သားလေး ၆နှစ်သားသို့ရောက်သောအခါကြမှ နိုင်ငံချားသွားအလုပ်လုပ်နေသော မင်းသမီးလေး ပြန်ရောက်လာက နေမင်းမောင်တို့ သားအဖ အကြောင်းမေးလေတော့သည်။
သူ၏မိဘများကလည်း နေမင်းမောင် တို့ကို ငွေပေး၍နှင်ချလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း ပြောပြသောအခါ မင်းသမီးလေးက အဲ့တုန်းက သူစိတ်မထိမ်း နိုင်လို့မှားခဲ့ကြောင်း ယခုတော့ သူ့ယောင်္ကျားနှင့် သားလေးမျက်နှာကိုမြင်လိုကြောင်းပြောကာ ရန်ကုန်မြို့အနှံ ပြဲပြဲစင်အောင် လိုက်ရှာတော့သည်။
မြို့စွန်တစ်နေရာမှာ ဆင်းရဲစွာ အကြော်ရောင်းနေသော နေမင်းကို တွေ့၍ သနားကျင်နာပြီး (နေမင်းမောင်က မင်းသမီး တာဝန်မကြေကြောင်း ပုဆိုးစွန်တောင်စွဲ၍ရန်တွေ့သည်ကိုသည်းခံ ပြီး)
သားအဖ၂ယောက်လုံးကို မိခင်တာဝန်ကြေပြွန်စွာ လုပ်ကြွေးပါရစေ ဆိုပြီးပြန်ခေါ်သွားလေသည်။
မင်းသမီလေးက ကန်ပနီ မှာ အလုပ်လုပ်ရင်း မောမောနှင့်ပြန်လာ နေမင်းမောင် လေးက သနပ်ခါးဘဲကြားလေးနှင့် နောက်ကလေးတစ်ယောက်ို ခါးတစ်ခွင်ချီကာ စောင့်မျှော်နေသည်။
မင်းသမီးပြန်ရောက်သည်နှင့် မင်းသမီးမောလာလား ရေအရင်သောက်မလား ရေသွားယူုလိုက်ဦးမယ် ပြန်လာရင်စားဖို့လည်းအဆင်သင့် အားလုံးချက်ထားပြီးပီးဟု လင့်ဝတ်တရားကျေပွန်စွာ ပရောပရီပြောလေသောအခါ
“အဲ့ဒါတွေကြောင့်ယောင်္ကျားကို ချစ်တာ ဟုပြောပြီး နမ်းဖို့အပြင်”
မှီညမ်း အကြည်တော် (လေးစားစွာဦးညွတ်မိ၏)
« Reply #61 on: October 18, 2012, 02:32:09 PM »
အားလုံးဘဲ ဗျာ ..
စပန်း ဆန် သွားရင် နဲနဲလောက် ခွေးလွှတ်ကြပါ ..
နိုးတူးရီရလွန်လို့ ဗိုက်တွေတောင် နာလာတယ်..
နင် အဲက အလုပ်ပြုတ်ရင် သရော်စာဘဲ ရေးစားတော့ ကွာ ..
တကယ်အရေးကြီးရင် မနေ့ ကတည်းကလုပ်
တကယ်အရေးမကြီးရင် နက်ဖြန်မှ လုပ်
ကဲ ... အဲတော့ ဒီနေ့ အားတာပေါ့ ....
« Reply #62 on: October 18, 2012, 02:36:08 PM »
Quote from: zawye on October 18, 2012, 02:13:59 PM
မင်းသမီးလေး ယောက်ျားတော့ ဖြစ်ပါရဲ့ ဒေါ်မည်းတူ က အတင်းအားဓမ္မတော့ ကျင့်ပါရဲ့ ....... ငါ့နဲ့နော် ဘယ်ဘ၀က ကုသိုလ်ကံကြောင့် ကိုဇော်ရဲရေးသမျှထဲမှာ နွဲ့ ချည့်နွဲ့နေရတာလဲ တခုပဲလွဲနေတယ် ..ဇာတ်လမ်းတွေထဲကတိုင်းပါပဲ ဒါပေမဲ့ ယောက်ျားနေရာနဲ့ မိန်းမနေရာလွဲများနေလားလို့ အဖြစ် ကမနှစ်ကနဲ့ မတူ....ဒန်တန့်ဒန် .....
ဖြစ်သမျှကိုအကောင်းမှတ်ခါ ဒီတခါမဆိုးဘူး ဟု ကျေနပ်နေသော
« Last Edit: October 18, 2012, 02:45:04 PM by Nay Min Maung »
THE COURSE OF TRUE LOVE NEVER DID RUN SMOOTH.. ♥ ♥ ♥
« Reply #63 on: October 18, 2012, 11:04:47 PM »
ဆရာမကြီး တကြီးဇော် လေးစားတယ်ဗျာ....အသကူုန်ကိုလေးစားသွားပြီ
လက်စွမ်းအရမ်းထက်လာပြီ...ကျတော် ဖတ် နေရင်းက ကို စားကြောင်း တပိုဒ်တိုင်းမှာ ရီနေရလွန်းလို့
လေးစားစွားဖြင့် ကျနော် ဒီနေရာကနေ ကို လေးစားသွားပါတယ်...
« Last Edit: October 19, 2012, 09:24:48 AM by hotsexygirl »
« Reply #64 on: October 18, 2012, 11:52:58 PM »
အဲ့လို ဟာ မျိုးကို ဆရာကြီး ဇဝန ရေးတာ ဖတ်ဖူးတယ်ဗျ ... စာအုပ်နာမည်က “ ကျွန်တော့လင် ” ဆိုလားပဲ .... အင်း .. ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ယဲယဲ ... ကြိုက်တယ်ဗျာ
« Reply #65 on: October 23, 2012, 08:15:40 PM »
ရဲရဲ၏ ပိုစ့်၁၀၀၀ပြည့်အထိမ်းအမှတ် စာမူကြီး
(ဒီဇာတ်လမ်းကို ကျန်တော်မရေးချင်တော့ညားလည်း နေမင်းမောင် လေးက မျက်ရည်လည်ရွဲ နှပ်တွဲလဲ နှင့် ချက်ခန်းတွင် ငိုယိုတောင်းပန်ကာ ရေးခိုင်းသည်က တစ်ကြောင်း (သူကျားကျားယားယားနှင့် ၃ပွင့်ဆိုင် အချစ်ဇာတ်လမ်းရေးပေပါတဲ့လေ) မင်းသမီးလေး က ကျန်တော့်အား တွေ့သည်နေရာတွင် ရိုက်မည်ဟု ခြိမ်းခြောက်သောကြောင့် တစ်ကြောင်း ကျန်တော်ရဲရဲလည်း ကြောက်ခြင်းတစ်ဝက် နေမင်းကို ခင်ရာမင်ကြောင်း ကတစ်ဝက်ဖြင့် ဤစာကိုရေးသားပါသည်။ ဤကားစကားချီးတည်း)
မြန်မာနိုင်ငံတွင် တတိယမြောက်အချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်သော သူဌေးကြီး ဦးထွန်းအေး နှင့် ဒေါ်အိုင်မေး တို့ တွင် နေမင်းမောင်ဟူ သော အလွန်တရာမှ ချောမောသော အရပ်ရှည်သော ဗလတောင့်သော ကိုရီးယားမင်းသား ချီးပိုင် နှင့် နင်လာငါလား ခွဲခြားရသော ၃နှစ်သားအရွယ်ရှိ သားဦးရတနာလေးတစ်ယောက်ရှိသတတ် ။
ပိုက်ဆံကလည်းချမ်းသာ အပူအပင်ကလည်းမရှိ ဆိုတော့ သူ့တို့သားလေး နေမင်းမောင် အားချစ်လိုက်ကျသည်မှာ ဒွန့်ဒွန့်လူး သည်ဟုဆိုရမလိုပင်။
တစ်နေ့သ၌ အလုပ်ကိစ္စဖြင့် အမေကြီးကား နိုင်ငံ ဆက်သွယ်ရေးနှင့်တယ်လီဖုန်း လုပ်ငန်းတွင် CEO တစ်ဖြစ်လည်း chairman တစ်သွယ် လုပ်ကိုင်နေသော အမေကြီးကား နိုင်ငံ၏ ဒုတိယ အချမ်းသာဆုံးတစ်ယောက်ဖြစ်သော ဒူးရင်းသီးမိုဘိုင်း ကန်ပနီ မှ ကိုရင်ပြုံးကိုတွေ့ရန်အလို့ငှာ
ဦးထွန်းအေးနှင့် ဒေါ်အိုင်မေးတို့မှာလည်း သားရတနာလေးပါ တစ်ပါးတည်းခေါ်ကာ ကိုယ်ပိုင်လီယာဂျက်ဖြင့် အမေရိက နိုင်ငံသို့ ထွက်ခွာခဲ့ကြလေတော့သည်။ ဤသို့ဖြင့် လေယာဉ်လေးသည် ဦးရောပ နိုင်ငံသို့ဖြတ်အပြန်တွင် လေမုန်တိုင်း မိုးကြိုး မီးတောင်ပြာများကြောင့် အင်ဂျင်စက်ချို့ယွင်းကာ မြေပြင်ဆီသို့ဦးတည်းထိုးဆိုက်လာလေတော့သည်။
“လေယာဉ်က ကျန်တော်တို့၂ မိနစ်ပဲ လေထဲမှာညိမ်အောင်ထိမ်းလို့ရတော့မယ် အင်ဂျင် ၂လုံးလုံးအလုပ်မလုပ်တော့ဘူး ဒါပေမယ့် ကျန်တော်တို့ဆီမှာ အသက်ကယ်လေထီး ၁ခုပဲရှိတယ် ဒီတော့ အဲ့ဒါကို သူဌေးတို့ ကြိုက်သလိုသုံးပါ ကျန်တော်ကတော့ ဒီလေယာဉ်နဲ့အတူတူ အသက်အသေခံမယ်ဟု” လေယာဉ် ကား သင်္ဘော မီးရထား အကုန်မောင်းလည်းမောင်း အကြောင်းလည်းသိသည့် ပိုင်းလော့ ကိုမိုန မှာ ပြောလေသည်။
ဒီတော့ သူဌေးကြီးတို့လင်မယားလည်း သူ့တို၏ သားဦးရတနာ နေမင်းမောင်လေးအား လေထီးကိုတပ်ဆင်ပေးလျှက် ငိုယိုကာ လေယာဉ်တံခါေးပေါက်မှပြစ်ချလိုက်လေတော့သည် ။ သို့သော်လည်း အလွန်တရာမှကံကောင်းလှသည့်နေမင်းလေးမှာ လေထီးနှင့်တညိမ့်ညိမ့်ဆင်းသွားပြီးသာကလ လေယာဉ်လည်း စက်ပြန်ကောင်းကာ ပုံမှန်ပြန်လည် ပျံသန်းနိုင်သည် ဟူသတတ် ။ လေယာဉ်ပေါ်တွင်တော့ သူဌေးမကြီးဒေါ်အိုင်မေးရဲ့ငိုသံများဆူညံလျှက် ငါ့တားလေးတော့ တနားပါတယ် ကံကိုက ဆိုးလွန်းတာပါတားလေးရယ် …………..မပူပါနဲ့ရှင်မရယ် ငါနောက်တစ်ယောက်ပြန်ရအောင် တာဝန်ယူပါတယ်ဟု သူဌေးကြီးဦးထွန်းအေးမှလည်း အားပေးလျှက်ရှိပေသည်။
ဒီလိုနဲ့ ကံဆိုးသူမောင်နေမင်းလေးဟာ လေတိုက်ရာသို့လိုက်ပါရင် အာဖရီးက တိုက် အင်မတန်မှ ငြိမ်းချမ်းသော လူတိုင်းလိုိလို ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဘယ်ဆု ရနေကြသော ကွန်ဂို နိုင်ငံအတွင်း တောကြီးမျက်မည်းအတွင်းသို့ ဖုတ်ကနဲကြရောက်လေတော့သည်။
ဤသို့ဖြင့်နေမင်းမောင်လေးလည်း တောကြီးမျက်မည်းအလည်တွင် ဆင်ကြီး နိုးနိုး အချစ်ည ကျားသစ်လေး
ကြံ က၀ိ တို့က ထိမ်းကြောင်းလျှက် မျောက်မည်းတူး နို့ချို့ကို စို့ကာ တဖြည်းဖြည်းအရွယ်ရောက်လာလေတော့၏။ နေမင်းလေးလည်း ငယ်နာမည်ပျောက်လျှက် တောထဲတွင် ကျားကျားယားယား ဟုအမည်နာမတွင်လေသေည်။(နေမင်းရေမင်းပြောတဲ့ကျားကျားယားယားဖြစ်ပြီနော်)
နေသာသာသောနေ့တစ်နေ့တွင် ကျားကျားယားယားတစ်ဖြစ်လည်း နေမင်းလေးက တောထဲတွင် နွယ်ကြိုးများခိုစီးလျှက် အယ်မလေးအယ်မလေး ဟု အော်ဟစ်ကျွေးကာ ဂနာမညိမ် လုပ်ချင်တာလုပ်နေလေတော့သည်။
ဤတွင် မင်းသမီးလေး ဟုအမည်နာမတွင်ခေါ်သော နုဖတ်ဥထွတ်ဝင်းဝင်းနုသည့် မိန်းကလေးတစ်ယောက်သည် နေမင်းမောင်လေးနှင့် သူမအား ရန်ဖြစ်အောင်စသည့် ကထိကကြီးzawye ဆိုသူအား တွေ့ရာသချိ င်္ုင်း ဒါးမဆိုင်းပဲ သတ်ရန် မြန်မာပြည်အနှံနေပြည်တော်ပါမကျန် လိုက်လံရှာဖွေပြီးသကာလ မတွေ့သည့်အဆုံး အာဖရိက နိုင်ငံ ကွန်ဂို သို့ ရောက်ရှိလာလေတော့သည်။ မိန်းကလေးပီပီ အမဲလိုက်သည်ကိုလည်း ၀ါသနာပါသော မင်းသမီးလေးသည် ကွန်ဂိုသို့ရောက်တုန်းရောက်ခိုက်အမဲလိုက်မည်ဟု ကြုံးဝါးကာ တောထဲသို့ဝင်လျှက် ယာယီတဲတွင် စခန်းချနေထိုင်လျှက်ရှိလေသည်.။
နေသာသာနေတစ်နေ့တွင် မင်းသမီးလေးသည် ဂိုးလေဘယ်ဝီစကီလေး သောက်ကာ ပိုကာဒေါင်းလျှက်ရှီနေစဉ်တွင် အယ်မလေးအယ်မလေး ဟုသော ကြယ်လောင်အောင်မြင်လှသည့် အသံဝါ၀ါကြီး ကိုကြားမိသောသကာလ အပေါင်းအသင်းများပင်မခေါ်တော့ပဲ တစ်ကိုယ်တည်း အသံကြားရာနောက်သို့သေနတ်ဆွဲကာ လိုက်လေတော့သည်
တဖြည်းဖြည်းနှင့် တောနက်ထဲသို့ ရောက်မှန်းမသိရောက်ရှိလို့လာတော့သည်။ ဤတွင်သာယာဝါပြောဖွယ်ကောင်းသော စမ်းချောင်းလေးတစ်ခုတွင် တစ်ကိုယ်တီးလွတ်လပ်စွာနေရေချိုးနေသော ကျားကျားယားယား အား တွေ့မြင်လိုက်သော မင်းသမီးလေးသည်…….
« Last Edit: October 24, 2012, 12:49:29 PM by tunaye2011 »
« Reply #66 on: October 23, 2012, 08:32:10 PM »
Quote from: zawye on October 23, 2012, 08:15:40 PM
(ဒီဇာတ်လမ်းကို ကျန်တော်မရေးချင်တော့ညားလည်း နေမင်းမောင် လေးက မျက်ရည်လည်ရွဲ နှပ်တွဲလဲ နှင့် ချက်ခန်းတွင် ငိုယိုတောင်းပန်ကာ ရေးခိုင်းသည်က တစ်ကြောင်း (သူကျားကျားယားယားနှင့် ၃ပွင့်ဆိုင် အချစ်ဇာတ်လမ်းရေးပေပါတဲ့လေ) မင်းသမီးလေး က ကျန်တော့်အား တွေ့သည်နေရာတွင် ရိုက်မည်ဟု ချိမ်းခြောက်သောကြောင့် တစ်ကြောင်း ကျန်တော်ရဲရဲလည်း ကြောက်ချင်းတစ်ဝက် နေမင်းကို ခင်ရာမင်ကြောင်း ကတစ်ဝက်ဖြင့် ဤစာကိုရေးသားပါသည်။ ဤကားစကားချီးတည်း)
မြန်မာနိုင်ငံတွင် တတိယမြောက်အချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်သော သူဌေးကြီး ဦးထွန်းအေး နှင့် ဒေါ်အိုင်မေး တို့ တွင် နေမင်းမောင်ဟု သော အလွန်တရာမှ ချောမောသော အရပ်ရှည်သော ဗလတောင့်သော ကိုရီးယားမင်းသား ချီးပိုင် နှင့် နင်လာငါလား ခွဲခြားရသော ၃နှစ်သားအရွယ်ရှိ သားဦးရတနာလေးတစ်ယောက်ရှိသတတ်
ပိုက်ဆံကလည်းချမ်းသာ အပူအပင်ကလည်းမရှီ ဆိုတော့ သူ့တို့သားလေး နေမင်းမောင် အားချစ်လိုက်ကျသည်မှာ ဒွန့်ဒွန့်လူး သည်ဟုဆိုရမလိုပင်။
ဦးထွန်းအေးနှင့် ဒေါ်အိုင်မေးတို့မှာလည်း သားရတနာလေးပါ တစ်ပါးတည်းခေါ်ကာ ကိုယ်ပိုင်လီယာဂျက်ဖြင့် အမေရိက နိုင်ငံသို့ ထွက်ခွာခဲ့ကြလေတော့သည်။ ဤသို့ဖြင့် လေယာဉ်လေးသည် ဦးေ၇ာပ နိုင်ငံသို့ဖြတ်အပြန်တွင် လေမုန်တိုင်း မိုးကြိုး မီးတောင်ပြာများကြောင့် အင်ဂျင်စက်ချို့ယွင်းကာ မြေပြင်ဆီသို့ဦးတည်းထိုးဆိုက်လာလေတော့သည်။
“လေယာဉ်က ကျန်တော်တို့၂ မိနစ်ပဲ လေထဲမှာညိမ်အောင်ထိမ်းလို့ရတော့မယ် အင်ဂျင် ၂လုံးလုံးအလုပ်မလုပ်တော့ဘူး ဒါပေမယ့် ကျန်တော်တို့ဆီမှာ အသက်ကယ်လေထီး ၁ခါပဲရှီတယ် ဒီတော့ အဲ့ဒါကို သူဌေးတို့ ကြိုက်သလိုသုံးပါ ကျန်တော်ကတော့ ဒီလေယာဉ်နဲ့အတူတူ အသက်အသေခံမယ်ဟု” လေယာဉ် ကား သင်္ဘော မီးရထား အကုန်မောင်းလည်းမောင်း အကြောင်းလည်းသိသည့် ပိုင်းလော့ ကိုမိုန မှာ ပြောလေသည်။
ဒီတော့ သူဌေးကြီးတို့လင်မယားလည်း သူ့တို၏ သားဦးရတနာနေမင်းလေးအား လေထီးကိုတပ်ဆင်ပေးလျှက် ငိုယိုကာ လေယာဉ်တံခါေးပေါက်မှပြစ်ချလိုကလေတော့သည် သို့သော်လည်း အလွန်တရာမှကံကောင်းလှသည့်နေမင်းလေးမှာ လေထီးနှင့်တညိမ့်ညိမ့်ဆင်းသွားပြီးသာကလ လေယာဉ်လည်း စက်ပြန်ကောင်းကာ ပုံမှန်ပြန်လည် ပျံသန်းနိုင်သည် ဟူသတတ် လေယာဉ်ပေါတွင်တော့ သူဌေးမကြီးဒေါ်အိုင်မေးရဲ့ငိုသံများဆူညံလျှက ငါ့တားလေးတော့ တနားပါတယ် ကံကိုက ဆိုးလွန်းတာပါတားလေးရယ် …………..မပူပါနဲ့ရှင်မရယ် ငါနောက်တစ်ယောက်ပြန်ရအောင် တာဝန်ယူပါတယ်ဟု သူဌေးကြီးဦးထွန်းအေးမှလည်း အားပေးလျှက်ရှိပေသည်။
ဤသို့ဖြင့်နေမင်းမောင်လေးလည်း တောကြီးမျက်မည်းအလည်တွင် ဆင်ကြီးနိုးနိုး အချစ်ညကျားသစ်လေး
ကြံက၀ိ တို့က ထိမ်းကြောင်းလျှက် မျောက်မည်းတူး နို့ချို့ကို စို့ကာ တဖြည်းဖြည်းအရွယ်ရောက်လာလေတော့၏။ နေမင်းလေးလည်း ငယ်နာမည်ပျောက်လျှက် တောထဲတွင် ကျားကျားယားယား ဟုအမည်နာမတွင်လေသေည်။(နေမင်းရေမင်းပြောတဲ့ကျားကျားယားယားဖြစ်ပြီနော်)
နေသာသာသောနေ့တစ်နေ့တွင် ကျားကျားယားယားတစ်ဖြစ်လည်း နေမင်းလေးက တောထဲတွင် နွယ်ကြိုးများခိုစီးလျှက် အယ်မလေးအယ်မလေးဟု အော်ဟစ်ကျွေးကာ ဂနာမညိမ် လုပ်ချင်တာလုပ်နေလေတော့သည်။
ဤတွင် မင်းသမီးလေး ဟုအမည်နာမတွင်ခေါ်သော နုဖတ်ဥထွတ်ဝင်းဝင်းနုသည့် မိန်းကလေးတစ်ယောက်သည် နေမင်းမောင်လေးနှင့် သူမအား ရန်ဖြစ်အောင်စသည့် ကထိကကြီးzawye ဆိုသာအား တွေ့ရာသချိ င်္ုင်း ဒါးမဆိုင်းပဲ သတ်ရန် မြန်မာပြည်အနှံနေပြည်တော်ပါမကျန် လိုက်လံရှာဖွေပြီးသကာလ မတွေ့သည့်အဆုံး အာဖရိက နိုင်ငံ ကွန်ဂို သို့ ရောက်ရှိလာလေတော့သည်။ မိန်းကလေးပီပီ အမဲလိုက်သည်ကိုလည်း ၀ါသနာပါသော မင်းသမီးလေးသည် ကွန်ဂိုသို့ရောက်တုန်းရောက်ခိုက်အမဲလိုက်မည်ဟု ကြုံးဝါးကာ တောထဲသို့ဝင်လျှက် ယာယီတဲတွင် စခန်းချနေထိုင်လျှက်ရှိလေသည်.။
နေသာသာနေတစ်နေ့တွင် မင်းသမီးလေးသည် ဂိုးလေဘယ်ဝီစကီလေး သောက်ကာ ပိုကာဒေါင်းလျှက်ရှီနေစဉ်တွင် အယ်မလေးအယ်မလေးဟုသော ကြယ်လောင်အောင်မြင်လှသည့် အသံဝါ၀ါကြီး ကိုကြားမိသောသကာလ အပေါင်းအသင်းများပင်မခေါ်တော့ပဲ တစ်ကိုယ်တည်း အသံကြားရာနောက်သို့သေနတ်ဆွဲကာ လိုက်လေတော့သည်
တဖြည်းဖြည်းနှင့် တောနက်ထဲသို့ ရောက်မှန်းမသိရောက်ရှိလို့လာတော့သည်။ ဤတွင်သာယာဝါပြောဖွယ်ကောင်းသော စမ်းချောင်းလေးတစ်ခုတွင် တစ်ကိုယ်တီးလွတ်လပ်စွာနေရေချိုးနေသော ကျားကျားယားယား အား တွေ့မြင်လိုက်သော မင်းသမီးလေးသည်…….
ဟုတ်ကျေးဇူးတင်စွာဒုတိယပိုင်းကိုမျှော်နေပါတယ် ...... အားပေးလျက်ပါ ပထမဆုံး လေးစားစွာ ပို့စ်ပေးလိုက်ပါတယ် ကရဲ ......
« Reply #67 on: October 23, 2012, 09:46:19 PM »
“လေယာဉ်က ကျန်တော်တို့၂ မိနစ်ပဲ လေထဲမှာညိမ်အောင်ထိမ်းလို့ရတော့မယ် အင်ဂျင် ၂လုံးလုံးအလုပ်မလုပ်တော့ဘူး ဒါပေမယ့် ကျန်တော်တို့ဆီမှာ အသက်ကယ်လေထီး ၁ခါပဲရှီတယ်ဒီတော့ သူဌေးကြီးတို့လင်မယားလည်း သူ့တို၏ သားဦးရတနာနေမင်းလေးအား လေထီးကိုတပ်ဆင်ပေးလျှက် ငိုယိုကာ လေယာဉ်တံခါေးပေါက်မှပြစ်ချလိုက်လေတော့သည် သို့သော်လည်း အလွန်တရာမှကံကောင်းလှသည့်နေမင်းလေးမှာ လေထီးနှင့်တညိမ့်ညိမ့်ဆင်းသွားပြီးသာကလ လေယာဉ်လည်း စက်ပြန်ကောင်းကာ ပုံမှန်ပြန်လည် ပျံသန်းနိုင်သည်
အဲ့ နေမင်း မောင်အသေးလေးကို အညင်ကပ်လို့ ကို တမင် ဥာဏ်ဆင်ပြီး လေ ယာဉ်ပေါ်က ပစ်ချခိုင်းလိုက်တာ
မျောက်မည်းတူး နို့ချို့ကို စို့ကာ
« Reply #68 on: November 03, 2012, 07:52:16 PM »
Quote from: Y.S.G on November 03, 2012, 07:11:39 PM
ဆားပုလင်းနေမင်း နှင့် မင်းသမီးဘော်လီပျောက်မှု
အင်မတန်ပျင်းစရာကောင်းသော တစ်နေ့၌ ကျွန်ုပ်နှင့် မိတ်ဆွေကြီး ဆားပုလင်းနေမင်းတို့သည် အင်းစိန်စီအိုင်ဒီရုံးဘေးရှိ ကာကာဆိုင်တွင် လက်ဘက်ရည်အကြွေးသောက်ကာ
လေပန်းလျက်ရှိကြသည်။ ထိုစဉ် အမှုလိုက်စာရေး နိုးတူး ဆိုသည့် သူငယ်ကလေးမှာ အပြေးအလွှားဝင်လာပြီးလျှင်၊
"ကိုယ့်လူတို့ ဒီမှာထိုင်ပြီးလေကန် မနေကြနဲ့။ ရုံးပေါ်ကို အမြန်လာခဲ့ကြဖို့ မင်းကြီးက အခေါ်လွှတ်လိုက်တယ်ဗျ။ " ဟု ဆိုသဖြင့် ကိုနေမင်းက..
"ကဲ ..အိုင်ပီရေ ရန်ကုန်မြို့  မှာ အမှုကြီးတစ်ခုတော့ ပေါ်ပြန်ပီထင်တယ်။ အကြောလေးဘာလေးဆန့်ကြတာပေါ့ဗျာ။ အမှုမလိုက်တာကြာတော့ ပျင်းတောင်နေပြီ။ "
ဟူ၍ရေရွတ်ကာ လက်ကြားမှသောက်လက်စ ရေခဲချောင်းတံဆိပ် စီးကရက်အား ပြာတောက် မီးသတ်ပြီး ကုတ်အကျီ င်္အိတ်ထဲထည့်ကာ ထထွက်သွားလေသည်။ ကျွန်ုပ်လဲ ကိုနေမင်းနောက်မှအပြေး
ကလေးလိုက်တာ မင်းကြီးရုံးခန်းသို့ ဝင်ကြလေသည်။ ရုံးခန်းအတွင်း၌ စီအိုင်ဒီ အကြီးအကဲ မစ္စတာကရစ်ပြုံးကား ယောက္ခမကြီး အိမ်မှာလာနေမည်ဆိုသည့် သတင်းကြားလိုက်ရသူ သမက်
"သြော်..လူကလေးတို့ ရောက်လာကြပြီလား။ မောင်မင်းတို့ကို အရေးအကြောင်းဆို လိုက်ရှာနေရတာပဲ။ အခု ..ကျွန်ုပ်တို့ စီအိုင်ဒီမှာ မီးလောင်နေပြီ။ ဒါကိုမောင်မင်းတို့
သိကြရဲ့ လား။ လူကလေးတို့ အားနေရင် ကာကာဆိုင်မှာပဲ အာလူးဖုတ်နေကြတယ်။ အဲဒါ ကောင်းပါသလား။"
"ဒါက ကျုပ်တို့အလုပ်ပါ မစ္စတာပြုံး၊ စုံထောက်ဆိုတာ လူတွေကြားထဲမှာ နေပြီး စုံစမ်းထောက်လှမ်းနေရတာပါ။ ခု မင်းကြီးပြောမယ့် မင်းသမီးဘော်လီပျောက်တဲ့ အမှုကို ကျုပ် အမြန်ဆုံး
ဖော်ထုတ်ပေးမယ်။ ကျုပ်တို့ လက်ဘက်ရည်ဆိုင်ထိုင်တာကို နောက်ဘယ်တော့မှ မပြောပါနဲ့မင်းကြီး။ "
"အိုကေ ..အိုကေ ..လူကလေး နေမင်း၊ မင်းကိုငါယုံတယ်။ မောင်မင်းလိုလူကလေးတွေ စီအိုင်ဒီမှာ အများကြီးရှိရင် ကျွန်ုပ်နေ့တိုင်း ကေတီဗီသွားလို့ရပြီ။ သိပ်ကောင်းတယ်။"
ကျွန်ုပ်မှာကား မင်းကြီး နှင့် ဆားပုလင်းနေမင်း တို့ အပြန်အလှန်ပြောနေကြသော စကားများကို ကြောင်စီစီနှင့်နားထောင်ကာ ဘာကိုမှ နားမလည်နိုင်ပဲ ဖြစ်နေသည်။ မင်းကြီးက ဘာမှမပြော
ရသေးပဲ ဘာအမှုဖြစ်နေသလဲဆိုတာကို ကျွန်ုပ်နှင့်အတူ လက်ဘက်ရည်သောက်နေသော ဆားပုလင်းနေမင်းက မည်သို့သိနေရသနည်း။ မင်းကြီးရုံးခန်းမှ ထွက်လာပြီး ကျွန်ုပ်မှာ ချက်ချင်းပင်
" ကိုနေမင်း ခင်ဗျားတယ်ဟုတ်တဲ့လူပဲဗျာ..မင်းကြီးဘာကိစ္စခေါ်ပြောသလဲ ဆိုတာ ခင်ဗျားဘယ်နှယ့်သိသတုန်းဗျ။ မဟုတ်မှလွဲရော ခင်ဗျား အကြားအမြင်တွေဘာတွေ လိုက်စားထားသလား
မပြောတတ်ဘူး။ တယ်ရှိုတဲ့လူပဲ။ "
" ဟား ဟား ဟား ... မဟုတ်ရပါဘူး အိုင်ပီရယ်။ ခုနင်က ကျုပ် နဲ့ ခင်ဗျား တူတူလက်ဘက်ရည်သောက်နေတုန်း ဘေးဝိုင်းက သတင်းထောက်တွေတူပါရဲ့ ။ မင်းသမီးဘော်လီပျောက်မှု ကို
စီိအိုင်ဒီက ဘယ်စုံထောက်လိုက်မလဲ ဆိုတာ လာသတင်းယူတာဆိုပဲ။ ကျုပ်က အဲဒါလေးကြားထားတော့ မင်းကြီးကို ခပ်တည်တည်နဲ့ဖိန့်ရတာပေါ့ဗျာ။ "
" ခင်ဗျား ဖိန့်တာကတော့ ဟုတ်ပါပြီ။ ခုဒီအမှုကို ဘယ်ကစလိုက်ကြမလဲ။ ကျုပ်တော့ မျက်ခုံးလှုပ်လှုပ်ပဲ ကိုနေမင်းရေ။ "
" အိုင်ပီ ကလဲ တယ်တွေးပူတတ်ရန်ကော..ပုထုဇနော ဥမ္မာတကောတဲ့။ စိတ်အေးအေးထားစမ်းပါဗျ။ "
" ခင်ဗျားလုပ်ကာမှ ပိုရှုပ်ကုန်ပြီ ကိုနေမင်းရေ..မြန်မာလိုပဲ လိုရင်းတိုရှင်းပြောစမ်းပါ။ ဘာမှမဆိုင်တဲ့ ပါဋ္ဌိတွေထည့်ထည့်မပြောစမ်းပါနဲ့ ကျုပ်ကတုံးတယ်ဗျ။ "
" အင်း ခင်ဗျား လိုက်မမှီတော့လဲ ကျုပ်ကနဲနဲချပြောရတာပေါ့ အိုင်ပီရယ်...အခင်းဖြစ်တဲ့ မင်းသမီးအိမ်ကပဲ သဲလွန်စ စရှာပြီး လိုက်ကြတာပေါ့။ ကဲပြောနေကြာတယ်ဗျာ...မြင်းလှည်းတစ်စီး
ငှားစမ်းပါ ပိုက်ဆံမပါလို့ ခင်ဗျားပဲ စိုက်ထားပေးဦး ကျုပ်ဆုငွေရတော့ ပြန်ဆပ်ပါ့မယ်ဗျာ။ "
" ကိုယ့်လူက လုပ်ပြီဗျာ...ဆားပုလင်းနေမင်း နာမည်ကျော်စုံထောက်ကြီးလုပ်ပြီး မြင်းလှည်းခတောင် မရှိဘူးလား။ "
" ဒီမယ်အိုင်ပီ ဇာတ်လိုက်ဆိုတာ အမြဲတမ်းလူဆိုးတွေနဲ့ သတ်ပုတ်နေရတာ မတော်တဆ ဟိုနားကျ ဒီနားကျနဲ့ ကျုပ်ရှိတာတွေ ကုန်တော့ မခက်ရောလား။ နားလည်စမ်းပါဗျာ..
ကျုပ်လိုကျော်မတွေးတတ်လို့ ခင်ဗျားတို့ ဇာတ်လိုက်မဖြစ်တာ ဟားဟားဟား။ "
ကြောက်စရာကောင်းသော အသံနက်ကြီးဖြင့် ရယ်မောလိုက်သော ဆားပုလင်းနေမင်းကို လန့်ကာ လမ်းဘေးမှာသစ်တော်သီးရောင်းနေသော ဈေးသည်မ၏ ကလေးငယ်မှာ တတ်မတတ်ချက်မတတ်
ထငိုနေသောကြောင့် ကိုနေမင်း၏လက်ကိုဆွဲကာ ခရီးသည်တင်ရန်အလို့ငှာရပ်လာသော မြင်းလှည်းပေါ်သို့ အတင်းထိုးတင်လိုက်ရပါတော့သည်။
စာကြွင်း ။။မန်မန်စားပီးဆက်ရေးပါမယ် တညလုံးရေးပါမယ် မိုးလင်းတဲ့ထိရေးပါမယ်
ဟီးး မိုက်လိုက်တာ ကြက်သီးမွေးညင်းများထသွားလောက်အောင်ကိုကောင်းပါတယ် ..... အိုင်ပီကိုဆော်ရေ... မိုက်တယ်ဗျာ ဆက်ရေး... အားပေးနေတယ်... ကျနော် အရမ်းကြိုက်တဲ့ ၀တ္ထုတပုတ်လို ရေးနေတဲ့အတွက် အပြီးရောက်ရင် ပီဒီအပ်ဖ် ကို့ဟာကိုလုပ်ပြီး သိမ်းထားပါ့မယ် ဟီး... ကျေးဇူးတင်လျက်ပါ ကဆော်
« Reply #69 on: November 04, 2012, 12:27:04 AM »
Quote from: Y.S.G on November 03, 2012, 11:55:30 PM
" ဘရာဆပ်...ဘယ်ကိုဂျောင်းရမလဲ ဆပ်။ "
" ကိုနေမင်း ..မင်းသမီးအိမ်က ဘယ်မှာလဲဗျ ပြောလိုက်ဦး။ "
" သြော်..အေးအေး ..ငါတို့ကို ဗဟန်း ရွှေတောင်ကုန်းလမ်း ခြံအမှတ် ၃၆ ကို ပို့ပေးစမ်းကွာ။ "
ဤသို့ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ စီးလာသော မြင်းလှည်းကလေးသည် ရွှေတောင်ကုန်းလမ်းထဲသို့ တရွေ့ ရွေ့  ဝင်လာခဲ့ပြီးလျှင် ကြေးဝါရောင်လက်လက်ထနေသော ခြံဝင်းကျယ်ကြီး
တစ်ခုရှေ့ သို့ ဆိုက်ရောက်လေသည်။ ခြံရှေ့ ၌ လုံခြုံရေးယူထားဟန်တူသော ရဲသားကလေးက ကျွန်ုပ်တို့နှစ်ဦးအား စေ့စေ့ကြည့်ပြီး
" ဆရာတို့ ဘယ်ဌာနကလဲ မသိဘူး။ လုံခြုံရေးအရ စစ်မေးရတာပါခင်ဗျာ။ "
" ကိုယ်က ဆားပုလင်းနေမင်းပါ အင်းစိန် စီအိုင်ဒီက၊ သူက ကိုယ့်မိတ်ဆွေ အိုင်ပီဆော်ကြီး ။ ဒီလောက်ဆို ကိုယ်တို့ဝင်လို့ရပြီလား အမှုအတွက်စစ်ဆေးစရာတွေ
ရှိလို့ လာခဲ့တာပါ။ "
" ဟာ ဆရာကိုနေမင်း ဆရာမှန်းမသိလို့ စစ်မိတာခွင့်လွှတ်ပါဆရာ။ ကျွန်တော်တို့က ဆရာ့ကို သိပ်လေးစားတယ်။ ကျေးဇူးပြုပြီး ဆရာ့လတ်မှတ်လေးတစ်ခုလောက်
ချီးမြှင့်ခဲ့ပါဆရာ။ အမှတ်တရသိမ်းထားချင်လို့ပါ။ "
" ရပါတယ်ကွာ ..ဒီလောက်ကတော့ "
ကိုနေမင်းက ပြောပြောဆိုဆို ကျွန်ုပ်အိတ်ကပ်မှာ ထိုးထားတဲ့ ပတ်ကားဖောင်တိန်ကို ဆတ်ကနဲယူပြီး ရဲသားလေး၏ ဝါကျင့်ကျင့်စာအုပ်ပေါ်မှာ သူ့ထိုးမြဲလတ်မှတ်ကို
ခပ်ကြီးကြီးထိုးပေးလိုက်သည်။ အိုင်ယာလန်ထီပေါက်သလို အင်မတန်ပျော်ရွှင်နေပုံရသွားတဲ့ ရဲသားလေးရဲ့  လက်တစ်ဖက်ကို ဆွဲယူကာ တစ်စုံတစ်ခုကို သူ၏ကုတ်အကျီ င်္ထဲမှ
" မင်းတာဝန်ကျေတဲ့အတွက် သက်သက်ချီးမြှင့်တာ .." ဟု ပြောကာ ခြံအတွင်းဘက်သို့ တက်ကြွသော ခြေလှမ်းကြီးများဖြင့် ရဲရဲတင်းတင်း လှမ်းဝင်သွားတော့သည်။
" ကိုနေမင်း...နေပါဦးဗျ၊ ခုန မြင်းလှည်းစီးဖို့ကျတော့ ပိုက်ဆံမပါဘူးပြောတယ်။ ခု ဟိုရဲသားလေးကိုကျတော့ မုန့်ဖိုးပေးဖို့ ခင်ဗျား ပိုက်ဆံရှိသလား။
အချင်းချင်း ဒီလိုလူလည်ကျတာတော့ မကောင်းဘူးဗျာ။ "
" အိုင်ပီနှယ် ..အသက်ကြီးသလောက် မျက်စိကလဲမွဲသကိုး။ ကောင်လေးကို ကျုပ်ပေးလိုက်တာ ပိုက်ဆံမဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ ဘိုင်ပြတ်နေလို့ မီးသတ်ပြီးပြန်သိမ်းထားတဲ့
ရေခဲချောင်း စီးကရက်အတိုလေးပါ။ "
မြန်မာပြည်တစ်လွှား ဖိန့်ဖိန့်တုန်အောင် နာမည်ကြီးလှသော ကျွန်ုပ်တို့ အင်းစိန်စီအိုင်ဒီမှ စုံထောက်ကြီးဆားပုလင်းနေမင်း ဆိုတာ အဲသလို စည်းစနစ်ကျတဲ့သူဖြစ်တယ်
ဆိုတာ ကျွန်ုပ်တစ်စထက်တစ်စ ပိုမိုယုံကြည်လာရပါပြီ။ စီးကရက်အတိုတစ်စ ကိုတောင် ယခုလို အကျိုးရှိရှိအသုံးချတတ်တာကြောင့် နာမည်ကြီးထိုက်ပါပေသည်ဟု
ကျွန်ုပ်ရှေ့ မှဦးဆောင်ကာ ခြံဝင်းလည်မှာ ရှိသော နှစ်ထပ်တိုက်ကြီး၏ ဧည့်ခန်းမဆောင်သို့ ကိုနေမင်းဝင်ရောက်သွားချိန်၌ တိုက်အိမ်ကြီး၏ ဧည့်ခန်းဆောင်သည်
ဟီးးးကြိုက်တယ်ဗျို့ဆက်ရေးပါ အားပေးနေပါတယ် ဗျို့ ကိုဆော်ရေ....